Semuenzaniso tsamba yekukumbira kubhadhara kweawa
Yakatumirwa ne Tranquillus | Nov 19, 2020 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Iwe unofanirwa kubhadharirwa chero nguva yekuwedzera yawakashanda. Payslip yako inofanira kuratidza kuti maawa mangani awakashanda uye pamutero wawakabhadharwa. Nekudaro, dzimwe nguva waunoshandira anokanganwa kuvabhadhara. Iwe unenge uine kodzero yekuvatora. Kune izvi, zvinokurudzirwa kutumira tsamba kune sevhisi ine chekuita kukumbira kugadziriswa. Heano mamwe etsamba tsamba yekukumbira kubhadhara.
Mamwe maratidziro pamusoro pemaawa
Chero awa rinoshandwa nemushandi panhanho yemushandirwi inobatwa seyakanyanya kuwanda. Chokwadi, maererano neLabour Code, mushandi anofanira kushanda maawa makumi matatu nemashanu pasvondo. Kupfuura izvozvo, kuwedzera kunoiswa pamushandirwi.
Zvisinei, nguva yekuwedzera uye nguva yekuwedzera haifanirwe kunge ichivhiringidzika. Isu tinotarisa maawa kana mushandi anoshanda-chikamu-nguva. Uye ndiani anodikanwa kushanda maawa anopfuura nguva yakataurwa muchibvumirano chake. Kunge iyo mamwe maawa.
Muzviitiko zvipi nguva yekuwedzeredza isingatariswe?
Pane mamiriro ezvinhu apo nguva yakawandisa isingatariswe. Mune urwu rudzi rwemamiriro ezvinhu, mushandi haangambo mvumo yekubhadharwa kwekuwedzera kupi. Izvi zvinosanganisira maawa aungadai wakasarudza kuita wega. Pasina kukumbira kubva kune waunoshandira. Iwe haugone kusiya yako post maawa maviri anonoka zuva rega rega. Wobva wakumbira kubhadharwa kupera kwemwedzi.
Ipapo, nguva yako yekushanda ingangotsanangurwa nechibvumirano chakatarwa chemutengo, zvichitevera chibvumirano chakataurirana mukati mekambani yako. Ngatimbofungidzirai kuti iyo yekuvapo kwevhiki nguva yakapihwa neiyi pasuru maawa makumi matatu nemasere. Muchiitiko ichi, kudarika hakuratidzwe, nekuti zvinosanganiswa mupakeji.
VERENGA Usazomboitazve Chimwe Chinyorwa Chisipo neThe Orthodidact Method
Chekupedzisira, pane zvekare zviitiko apo nguva yakawandisa inotsiviwa neyemari yekuzorora, saka kana uine kodzero nazvo. Iwe haugone kutarisira chimwe chinhuzve.
Ungaratidza sei kuvapo kweasina kubhadharwa nguva yekuwedzera?
Mushandi anoda kuenderera mberi nekunyunyuta pamusoro peasina kubhadharwa nguva yekuwedzera ane mukana wekuunganidza magwaro ese achibvumidza kutsigira chikumbiro chake. Kuti aite izvi, anofanirwa kuona zvakajeka maawa ake ekushanda uye otarisa huwandu hwemaawa ekuwedzeredza ane chekuita negakava iri.
Kamwe zvese zvasimbiswa. Iwe wakasununguka kuburitsa seumboo humbowo hwevamwe vako, vhidhiyo yekuongorora. Iwo maratidziro anoratidzira ako eovertime maawa, izvo zvinoburitswa zvemagetsi kana mameseji eSMS anoratidza kudyidzana kwako nevatengi. Makopi emagetsi diaries, rekodhi yenguva wachi. Zvese izvi zvinofanirwa kunge zvichiperekedzwa nemaakaundi ane chekuita neawa yekuwedzera.
Kana ari iye waunoshandira, anofanirwa kugadzirisa mamiriro acho ezvinhu kana chikumbiro chako chiri chechokwadi. Mune dzimwe nzanga iwe unofanirwa kurwa mwedzi wega wega. Pasina kupindira kwako, kubhadharwa kweawavhi kuchakanganwika zvakarongeka.
Maitiro ekuenderera mberi nekunyunyuta kwekusabhadhara kweawa yako yakawandisa?
Nguva yakawandisa inoshandiswa nevashandi kazhinji ndeyezvido uye zvido zvebhizinesi. Nekudaro, iye mushandi anozviona achinetsekana nekusabhadharwa kweawa yake yekuwedzera anogona kuita chikumbiro chekumisikidzwa nemushandirwi wake.
Matanho akati wandei anogona kuteverwa kuitira kuti uwane mhinduro yakanaka. Pakutanga, kungave kuri kutarisa kune iye mushandirwi. Saka nyaya yacho inogona kugadziriswa nekukurumidza nekunyora tsamba uchitsanangura dambudziko rako. Kune rimwe divi, muchiitiko chekuti mushandirwi akaramba kubhadhara zvaakakwereta. Ichi chikumbiro chinofanirwa kunge chichiitwa netsamba yakanyoreswa inekubvuma kwekugamuchira.
VERENGA Tsamba template: kukumbira mubhadharo wezororo rako risingabhadharwe
Kana waunoshandira achiri asingadi kugadzirisa mamiriro ezvinhu, mushure mekugamuchira tsamba yako. Bata vamiriri vevashandi kuti uvataurire nezvenyaya yako uye utsvage mazano. Zvichienderana nehuwandu hwekukuvara kwako uye kurudziro yako. Zvichava kwauri kuti uone kana iwe uchienda kudare redzimhosva. Kana kana iwe ukangomisa iro rekuwedzera basa. Shanda zvakanyanya kuti uwane zvakafanana, hazvinyatsonakidza.
Tsamba matemplate echikumbiro chekubhadhara nguva yekuwedzera
Heano maviri mamodheru iwe aunogona kushandisa.
Musoro: Chikumbiro chekubhadharwa kweawa
Kuve mushandi kubva [zuva rekuhaya] pa [chinzvimbo], ndakashanda [nhamba yemaawa ekuwedzera akashanda] kubva [musi] kusvika [zuva]. Zvese izvi kuitira kuti vabatsire mukusimudzira kambani uye kuzadzisa zvinangwa zvepamwedzi. Saka ndakapfuura maawa makumi matatu nemashanu, nguva yekushanda zviri pamutemo pavhiki.
Chokwadi, pandakagashira pepa rangu rekubhadhara remwedzi we [mwedzi pakaitika kukanganisa kwangu] uye pandakaverenga, ndakaona kuti awa maawa ekuwedzera haana kuverengwa.
Ichi ndicho chikonzero nei ndichizvibvumira kukutumira iwo iwo madimikira achipfupisa nguva yangu yekuwedzera munguva ino [batanidza magwaro ese anopembedza maawa ako ekushanda uye kuratidza kuti wakashanda nguva yekuwedzera].
Ndinoda kukuyeuchidza kuti mukushandisa kwezvakapihwa Chinyorwa L3121-22 cheLabour Code, nguva yese yekuwedzera inofanira kuwedzerwa. Zvinosuruvarisa, izvi zvakange zvisina kudaro nemubhadharo wangu.
Saka ndinokukumbira kuti upindire kuitira kuti mamiriro angu agadziriswe nekukurumidza sezvazvinogona.
Kumirira mhinduro kubva kwauri, ndokumbira ubvume, Madam, nezvangu zvakanaka.
Tsamba yakanyoreswa ine kubvuma kwekugamuchira
Sechikamu chevashandi vekambani kubvira [zuva rekuhaya] panzvimbo [yepositi], ndine kondirakiti yebasa iyo inotaura nezvenguva yekushanda yevhiki isingapfuure maawa makumi matatu nemashanu. Nekudaro, ini ndichangogamuchira pepa rangu rekubhadhara chikwereti uye chakandishamisa ndechekuti nguva yekuwedzera yandaishanda haina kutariswa.
Naizvozvo, mukati memwedzi [mwedzi], ndakashanda [huwandu hwemaawa] nguva yekuwedzera pakukumbira kwaMadam [zita remutariri] kuti ndiite zvinangwa zvemwedzi.
Ndinoda kukuyeuchidza kuti maererano neLabour Code, ndinofanira kuwana kuwedzera kwe25% kwemaawa masere ekutanga uye 50% kune vamwe.
Saka ini ndinokumbira iwe kuti undibhadhare nemutsa chikwereti changu.
Kutenda iwe pamberi pekupindira kwako nedhipatimendi re accounting, ndokumbira ubvume, Changamire, kutaura kwekufunga kwangu kwepamusoro.
Dhawunirodha "Premier-modele.docx"	Premier-modele.docx - Yakadzoswa ka7780 - 20 Kb
VERENGA Bulleted runyorwa uye kuverenga
Dhawunirodha "Deuxieme-modele.docx"	Deuxieme-modele.docx - Yakadzoswa ka7274 - 20 Kb
Semuenzaniso tsamba yekukumbira kubhadhara kweawa January 8th, 2022Tranquillus
pashureCovid-19: iyo yekumirira nguva inobviswa kune kumwe kumiswa kwebasa
zvinoteveraFrance Relaunch | Kutanga kwe "1 mudiki wechidiki, 1 mhinduro" chikuva
Email template yekuzivisa kuti iwe unopinda mumusangano